ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သွေးခွဲမှုကို လိုလားသူတွေရဲ့ လှည့်ကွက် ကြိုဆွဲနေတာကို ၀ိုင်းဝန်းဟန့်တားကြဖို့နဲ့ သတိထားကြဖို့ “ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« To whom it may concern in USA Government and authorities in Fort Wayne, Indiana State
Investors in Burma Telecom Sector Face ‘Corrupt, Crony Practices’: Report »
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သွေးခွဲမှုကို လိုလားသူတွေရဲ့ လှည့်ကွက် ကြိုဆွဲနေတာကို ၀ိုင်းဝန်းဟန့်တားကြဖို့နဲ့ သတိထားကြဖို့ “
Forum 2000 ညီလာခံကြီးမှာ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားတို့ တွေ့ဆုံစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ – http://www.forum2000.cz/)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်တုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ် သတိထားဖို့ အမျိုးသားဒီမိုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားကလည်း အင်္ဂါနေ့က တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို မအင်းကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ တိုင်းပြည်ညီညွတ်ရေးကို မလိုချင်ဘဲ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးကို လိုလားသူတွေရဲ့ လှည့်ကွက် အလိုကျလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသူ အမျိူးသမီးတဦး ပြောသွားတဲ့အသံကို ကြားရတဲ့အတွက် သူ အားတက်မိတယ်လို့လည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
“ပြည်ပမှာ ရှိနေသူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအချက်ကို သတိပြုဖို့ ကျမ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ ညီညွတ်မှုတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ ကျမတို့ လိုအပ်နေတာပါ။ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ နားလည်မှု၊ စာနာကူညီမှုတွေကို ကျမတို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညွတ်ဖြစ်ဖို့ လိုလားပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျမတို့ ဖြေရှင်းကျော်လွှားရမယ့် ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနေတာပါ။ ခွဲခြားမှုနဲ့ ညီညွတ်ရေးကို မလိုလားသူတွေ၊ သွေးခွဲမှုကို လိုလားသူတွေရဲ့ လှည့်ကွက် ကြိုဆွဲနေတဲ့အတိုင်း ကျမတို့ မကသင့်ပါဘူး။”
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြား အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုး မရှိတဲ့အပေါ်မှာ အထူးပဲ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ လူပေါင်း ၂၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁ သိန်းခွဲနီးပါးလောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံက သံဃာတော်တွေအနေနဲ့ မူဆလင်တွေအပေါ် အမျက်ဒေါသ ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး သတိရကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ဒီလို သတိရလိမ့်မယ်ဆိုရင် မူဆလင် ညီအကိုတော်တွေ၊ ညီအမတွေကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သူရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြပြီး ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
This entry was posted on September 18, 2013 at 1:56 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.